Muwaadin Somali ah oo lagu helay inuu ka mid yahay Shabaab.
Maxamuud Saciid Faarax oo ah Muwaadin Soomaaliyeed oo maxkamadeyntiisa ay ka socota Maxkamad ku taalla gobolka Minisota ee dalka Mareykanka Ayaa lagu cadeeyay in uu ka tirsan yahay Xarakada Al Shabaab.
Maxkamada ayaa waxaa la horkeenay filimo muujinaya sida Al Shabaab ay u sameeyay falal isqarxinta ee loo adeegsado dhalinyarada Soomaalida ee Mareykanka uga yimaada inay ka barbar dagaalamaan Xarakada Al Shabaab.
Filimka iyo cadeymaha kale oo ay soo bandhigtay Maxkamada ayaa waxaa lagu muujiyay iyadoo dhalinyaro Soomaali oo ka tagay Mareykanka ay fulinayaan falal isqarxin iyo sidoo kale iyaga oo ku qalqaalinaya dhalinyarada Soomaalida ah ee Mareykanka inay yimaadaan Soomaaliya si ay ula dagaalamaan Shabaab ama ay u taageeraan.
4 ruux oo Soomaali ah oo horay loo xukumay kadib markii lagu helay cadeymo ah inay raageeri jireen Al Shabaab ayaa waxa ay ku cadeeyeen Maxud Saciid Cumar inuu taageero dhinac waliba ah uu u fulinayay Al Shabaab islamarkaana uu iyaga xitaa kula taliyay inay taageeraan Al Shabaab.